Flam အ Myrdal, နော်ဝေ: တစ်ဦးကလှပသောနွေရာသီ Stop | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > Flam အ Myrdal, နော်ဝေ: တစ်ဦးကလှပသောနွေရာသီ Stop
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 04/02/2020)
Flam ထံမှ Myrdal ဖို့ Flam မီးရထားလမ်းအလှဆုံး၏တဦးတည်းဖြစ်ဟု ရထားခရီး ကမ်ဘာပျေါတှငျအကြှနျုပျတို့သဘာဖြစ်လို့နားလညျနိုငျ. အဆိုပါခရီးသာတစ်နာရီကြာပေမယ့်ရှုခင်းအမှန်တကယ်အသက်ရှု-ဆည်းပူးနေဖြစ်ပါတယ်. ဤအတွေ့အကြုံကိုလက်လွတ်မနေပါနဲ့ နော်ဝေလာရောက်လည်ပတ်. အခြိနျနာရီခရီးစဉ်အတွက်, ရထားပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာဖြစ်သော Flam အတွက် Sognefjord ကနေခရီးသည်ကြာ, မှာဖြစ်သည့် Myrdal တောင်ကြီးတောင်ငယ်ဘူတာမှ 867 ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်မီတာ. ဒါဟာကမ်ဘာပျေါတှငျ steepest စံ-gauge ရထားလမ်းလိုင်းများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါမီးရထားလမ်းကိုယူ 20 ဖြည့်စွက်ဖို့နှစ်ပေါင်း. အများဆုံးရဲများနှင့်ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာချွတ်နှင့်တောင်တော်ပြပွဲထဲကပြေးနျောရထားလမ်းသမိုင်းအစဉ်အဆက်မမြင်စဖူးကြောင်းကိုအဆိုပါလိမ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း. Myrdal မှ Flam, နော်ဝေ: တစ်ဦးကလှပသောနွေရာသီ Stop အမှန်တကယ်တစ်သက်တာ၏ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်.
အဆိုပါ Flam မီးရထားစီးနင်း
Flam ထံမှ Myrdal မှရထားယူပြီးသငျသညျတစျဆငျ့ယူပါလိမ့်မယ် 20 ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, 18 လက်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားခဲ့ကြသည်ရာ, က Flam ချိုင့်ဖွင့်ယင်း၏လမ်း snakes အဖြစ်နှင့်ကျေးရွာအများအပြားမှာရပ်တန့်. အဆိုပါမီးရထားခရီးသည်တစ်ဦးမြင်ကွင်းကျယ်ရှုထောပေးသည်ပေမယ့်အကောင်းဆုံးအမြင်များဘို့လာမယ့်ပြတင်းပေါက်တစ်ဦးထိုင်ခုံကြိုးစားရနှင့်ဤအတွက်ဖွင့်နိုင်သည် နွေရာသီ အပိုအထူးအတွေ့အကြုံ. Myrdal ဘူတာရုံ မြင့်မားတဲ့အထိတောင်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်နှင့်စောင့်ဆိုင်းအခန်းထဲမှာပေမယ့်ဘာမျှမပါဝင်ပါသည်, လက်မှတ်စားပွဲပေါ်မှာ, နှင့်တစ်ဦး သေးငယ်တဲ့ကဖီး. သငျသညျတောငျပျေါတက်ဆင်းရထားစီးနိုင်ပါတယ်.
နွေရာသီအတွက် Myrdal မှ Flam
နွေရာသီ Flam ထံမှ Myrdal မှရထားယူမယ့်ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်. ရာသီဥတုပူနွေးသည်နှင့်အရာခပ်သိမ်းသည်စိမ်းသော! လှိမ့်တောင်ကုန်းများနှင့်ကျောက်သလင်း-ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစဉ်းစားပါ running ရေ အပြည့်အဝပွင့်အတွက်အဆင်းလှအသီးအရွက်များနှင့်ပန်းပွင့်နှင့်အတူ. လည်းရှိပါတယ် တောင်တက်လမ်းကြောင်း Flam နှင့် Myrdal ဖို့နဲ့ကနေနှစ်ဦးစလုံး. ဒါဟာသင် Myrdal မှရထားကိုတက်ဖမ်း, ပြီးတော့ပြန်ချခွနှင့်နေရောင်ခြည်ကိုခံစားနိုင်သည်ကိုဆိုလိုတယ်.
နော်ဝေလာရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာသင်ပြုရမည်ဖြစ်သည်တဦးတည်းအရာလည်းမရှိဆိုပါက, Myrdal မှ Flam ကနေရထားလမ်းရထားက. ဒါဟာအဆင်းလှနွေရာသီမှတ်တိုင်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါမီးရထားအထိအတူအားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးပြေး 10 နွေရာသီအတွက်တစ်နေ့လျှင်ထွက်ခွာ. လက်မှတ်တွေကိုဝယ်ယူရန် ဒေသအလိုက်နော်ဝေအတွက်မဆိုလိုက်ပါမီးရထားဘူတာရုံမှာဒါမှမဟုတ် NSB ခေါ်ဆိုခစင်တာခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်. သူတို့ဟာလက်ရှိအွန်လိုင်းရရှိနိုင်မဟုတျပါ. စိတ်ပျက်မိကြောင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးတစ်သက်တာ၏အတွေ့အကြုံအဖြစ်မကြာမီသငျသညျနော်ဝေရောက်ရှိအတိုင်းဤရထားအဘို့သင့်လက်မှတ်တွေရဖို့သေချာပါစေ!
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရာပူဇော်သက္ကာကို ဥရောပရထားလက်မှတ်တွေ, ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ Save ကိုတစ်ဦးကရထားဘ်ဆိုဒ်ကိုသွားနှင့်စီးနင်းပျော်မွေ့.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fflam-to-myrdal-norway%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#Flam #Myrdal #နွေရာသီ .ရာဝတီ
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား
ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား